Qunsuliyada Faransiiska ee magaalada Jeddah oo la weeraray - Jowhar somali news leader
Home NEWS Qunsuliyada Faransiiska ee magaalada Jeddah oo la weeraray
Qunsuliyada Faransiiska ee magaalada Jeddah oo la weeraray
Nin mindi watay ayaa weeraray qunsuliyadda Faransiiska ee Jiddah, wuxuuna halkaas ku dhaawacay mid ka mid ah waardiyeyaasha.
Wakaalada wararka ee AFP ayaa sheegtay in dhacdadaas oo maanta ahayd ay xaqiijiyeen saraakiisha Sacuudiga.
War qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Faransiiska ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay:
“Qofka weerarka soo qaaday waxa qabtay ciidamada amniga ee Sacuudiga, isla markii uu weerarka bilowday. Waardiyaha dhaawacmay waxaa loo qaaday isbitaal, xaaladdiisana ma xumo”, ayey qoreen AFP iyo Reuters.
Safaaradda Faransiiska oo ku taalla Riyadh waxay si adag u cambaareysay weerarka, waxayna muwaadiniinteeda Sacuudiga ku sugan u sheegtay in ay si wayn u feejignaadaan.
Previous articleVendée Globe sets sail without spectators in the midst of virus reduction
Next articleShirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey Miisaaniyadda 2021